Istaraatiijiyadda Woodcutter »- faa iidada dhakhsaha leh ee ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah | vfxAlert official blog
Istaraatiijiyadda Woodcutter »- faa iidada dhakhsaha leh ee ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah
Fursadaha ikhtiyaariga ah ee istiraatiijiyadda cusub ee 'newbie's xeeladaha' badanaa waxay u maraan habka dhibaatada: fallaaraha kore / hoos halkii Fractals joogto ah, tilmaamayaasha qaab jaantusyo midab leh calaamado aan la fahmi karin iyo «horumarin» kale ayaan ka caawinayn inay faa'iido helaan. Dhanka kale, ciyaartooyda xirfadleyda ah iyo adeegyada calaamadaha ganacsiga, sida vfxAlert, waxay adeegsadaan iskudhaf fudud iyo waqti-tijaabin ah oo ah aaladaha caadiga ah, sida istiraatiijiyadda «Woodcutter».
Istaraatiijiyaddu waxay isticmaashaa laba nooc oo celcelis ahaan celceliska dhaqdhaqaaqa ah: laba fudud (SMA) iyo hal celcelis celcelis dhaqaaq (EMA).
Tilmaamahan wuxuu u shaqeeyaa labadaba isbeddel ahaan iyo sida qalab oscillator ah, sidaas darteed waxay noqon doontaa calaamadda ugu dambeysa ee lagu furo ikhtiyaar.
SMA (85) iyo EMA (75) waxaa loo tixgaliyaa inay yihiin “celcelis ahaan” celcelis ahaan dhaqaaqitaan kuwaas oo jihada jihada la go’aamiyay, SMA (5) waxay noqon doontaa «dhakhso» celcelis dhaqaaq iyo calaamadda ugu horreysa ee furitaanka ikhtiyaarka.
Ikhtiyaar CALL. Celceliska dhaqsaha badan ee dhaqaaqa ayaa hoos uga soo dhacaya labada celcelis celcelis qunyar socod ah oo ay la socoto xaqiijinta tilmaame MACD (hal ama in ka badan oo baararka ah waa inay ka sarreeyaan xariiqyada eber).
Haddii isku celceliska celceliska dhaqdhaqaaqa uu isu dhow yahay midba midka kale, markaa tani waxay muujineysaa isbeddel isbeddel ah. Waxaan ku sii nagaaneynaa banaanka suuqa waxaanan sugeynaa calaamadda xigta.
marba marka ka sii dambeysa dhaqdhaqaaqa dhinaca suuqa ah, waxaa sii kordheysa suurtagalnimada isbeddel xoog leh ka dib dhammaystirkiisa. Xaaladaha noocaas ah, waxaad furi kartaa ganacsiyada calaamadaha ugu horreeya ee Dib-u-Celinta Celceliska Dhaqdhaqaaqa (sida ku cad sawirka) iyo calaamadaha ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah leh oo ka socda vfxAlert;
haddii dillaalku fursad u siiyo inuu xiro ikhtiyaarka illaa uu ka dhacayo, markaa hubaal waxaan hagaajineynaa macaamilka (xitaa haddii ay faa'iido tahay!) Marka ay soo ifbaxdo calaamadda ka soo horjeedka - soo noqoshada celceliska celceliska celceliska qunyar socodka ah ee dhaqsaha badan ama haddii histogaraamku ee MACD wuxuu beddelaa jihada heerar heer eber ah.
waqtiga dhicitaankiisa waa la kordhin karaa ilaa 5-7 daqiiqo haddii isbeddelka joogtada ah la arko. Sidoo kale inta lagu jiro xilliyadaas oo kale, waxaa suurtagal ah in la furo dhowr ikhtiyaar oo leh waqti shaqeynaya oo kala duwan si looga qaado ugu badnaan dhaqdhaqaaqa halista ugu yar.
Istaraatiijiyadda intraday «Woodcutter» waxay u taagan tahay nidaam lagu kalsoonaan karo oo xagjir ah oo xagjir ah oo loogu talagalay ganacsiga suuqa xasilloon. Halbeegyada qalabka ganacsiga waa la beddeli karaa iyadoo loo eegayo isbeddelka hadda jira. Mar labaad, waxaan ku xusuusineynaa in calaamadaha ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah ee ugu faa'iido badan ay ku jiri doonaan oo keliya meelaha isbeddelka, inta lagu jiro xilliyada fidsan ee aan ka maqanahay suuqa!
Istaraatiijiyaddu waa mid si otomaatig ah u shaqeyneysa, laakiin sida nidaam kasta oo wax lagu nadiifiyo oo ku yaal daqiiqad daqiiqad ah, way fiicantahay in lagu ganacsado gacanta. Tani waxay gacan ka geysan doontaa in si wax ku ool ah loogu hagaajiyo istiraatiijiyadda MACD calaamadaha dib u celinta, ka soo kabashada celceliska dhaqdhaqaaqa iyo helitaanka faa'iido deggan maalin kasta.